Fiaraha-miasa amin'ny fampiharana ny fihenan'ny TVA ho an'ny gazy fandrehatra., Direction Générale des Impôts
Fiaraha-miasa amin'ny fampiharana ny fihenan'ny TVA ho an'ny gazy fandrehatra.
Vita sonia ny 2 jolay ny fifanarahana teo amin'ny minisiteran'ny tontolo iainana, ny minisiteran'ny toekarena sy ny vola ary ny komity butana malgache. Ity fiaraha-miombon'antoka amin'ny daholobe ity dia manambatra ny fampiroboroboana angovo madio, fanatsarana ny fiainam-pianakaviana ary ny fanoherana ny fahasimban'ny ala.
Dingana voalohany izay ahafahana mampihena ny TVA amin'ny gazy fandrehatra 20% ka hatramin'ny 5%. Miaraka amin'ny 97% ny isan-tokantrano mbola mampiasa hazo / arina, miaraka amin'ny fanjifana hazo 450,000 t isan-taona, ity fifanarahana ity dia sady hanatsara ny fiainam-pianakaviana no hampihena ny ala.
Ny fifanarahana dia manan-kery mandritra ny herintaona ary tsy maintsy havaozina. Nanamorana ny vidin'ny butana 9% ary nizara tavoahangy 15000 maimaim-poana, anisan'izany ny 6000 4kg ary 9000 9kg. Fihenam-bidy 80% no hapetraka amin'ny varingarina 9 kg ary fivarotana solika amin'ny antsinjarany no hatao amin'ny isa amidy any amin'ny Faritra. Ny CMDB dia hanamboatra ala indray 60 ha / taona amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana.